Apple weputara Beta nke ise nke tvOS 10.2.2 maka ndị mmepe | Esi m mac
Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta, kwadebe ihe kpatara Apple ji wepụta ya ise beta nke tvOS 10.2.2. nanị izu abụọ ka ahapụchara beta nke anọ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, Apple na-eme ngwangwa betas nke ụdị ọhụrụ a nke sistemu Apple TV nke ahu gha achoputa ncha dika ihe ikpeazu diri ndi nile.
Dị ka ị nwere ike ịmaworị, ihe dị ka otu ọnwa gara aga Apple wepụtara mbipute 10.2.1 nke ngwa ngwa esonyere beta mbụ nke 10.2.2 tvOS.
Apple eweputala beta ọhụrụ maka Apple TV, beta nke ise nke tvOS 10.2.2. nke ga - adi na ndi mmepe na n’okwu a maka ọgbọ nke anọ Apple TV, nke dị ka ị maara, bụ naanị nke nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru tvOS.
Dị ka n'oge ndị ọzọ, iji wụnye beta ọhụrụ a ị ga-ejikọ Apple TV na kọmputa site na eriri USB-C ma gbaa iTunes. Ọ bụrụ na ịmeworị nke a na beta gara aga, ugbu a Ga-enweta update ozugbo na gị Apple TV na-akpaghị aka.
Enweghi mgbanwe mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ ndozi ahụhụ na anọ mbụ nke tvOS 10.2.2, yabụ ọ dị ka mmelite a lekwasịrị anya na obere ndozi nchebe anaghị ahụ anya. tvOS 10.2.2 ga-abụ otu n'ime mmelite kachasị ọhụrụ na tvOS 10 sistemụ arụmọrụ dị ka Apple na-arụkwa ọrụ na nsụgharị ọhụrụ nke tvOS, tvOS 11.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Apple weputara beta nke ise nke tvOS 10.2.2 maka ndị mmepe
MacBook Pro 13 "isi ma ọ bụ MacBook Retina 12-inch?